ဒီန့မှာကျရောက်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ သူမဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးမျိုးစန္ဒီကျော် – Cele Top Stars
ဒီန့မှာကျရောက်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ သူမဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးမျိုးစန္ဒီကျော်
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးမျိုးစန္ဒီကျော် ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ကို အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေ နဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပါလုပ်ကိုင်နေပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သမီးလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ဘဝကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်…။
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့လေးကတော့ မျိုးစန္ဒီကျော် ရဲ့ သမီးလေးမွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာ အသက် (၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစန္ဒီကျော် ကတော့ ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ကို “Happy Birthday ပါမေ့ချစ်သမီးလေးရေ. (9.11.2021) မှာ ကျရောက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ (၇)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှစပြီးမေ့သမီးလေး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင် စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ကြုံလာသမျှ လောကဓံကို ထက်မြတ်တဲ့ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့မေတ္တာတရားကို အသုံးပြုပြီး ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။ အမှန်အမှားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ပြီး ဘဝမှာကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးနိုင်တဲ့အပြင် အများပေါ်မှာလည်း ကိုယ်ချင်း စာတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပါစေ…။
မေမေ့အပေါ်မှာလည်း အရမ်းကို သိတတ် နားလည်လွန်းတဲ့ သမီးလေးကို နောက်မွေးနေ့ပေါင်းမြောက်များစွာတိုင်အောင် မေမေ စောင့်ရှောက်ခွင့်ရနိုင်ပါရစေ။ သမီးလေးရေ။”ဆိုပြီး သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို ဆန္ဒပြုရင်းသမီးလေးကို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးမြိုးစန်ဒီကြျော ကတော့ တဈခတျေတဈခါက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားပွီး ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈလကျအနနေဲ့ကို အောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။ လကျရှိမှာတော့အနုပညာအလုပျတှေ နဲ့အတူ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးကိုပါလုပျကိုငျနပွေီး ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့ သမီးလေးကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျရငျး ဘဝကို အေးခမျြးစှာဖွတျသနျးနခေဲ့ပါတယျ…။
ဒီနေ့ နိုဝငျဘာလ (၉)ရကျနလေ့ေးကတော့ မြိုးစန်ဒီကြျော ရဲ့ သမီးလေးမှေးနရေ့ကျမွတျကရြောကျတဲ့နရေ့ကျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ေးနရေ့ကျလေးမှာ အသကျ (၇)နှဈပွညျ့မွောကျသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ မြိုးစန်ဒီကြျော ကတော့ ဒီနမှေ့ာ မှေးနကေ့ရြောကျတဲ့ သမီးလေးရဲ့ မှေးနအေ့တှကျကို “Happy Birthday ပါမခေ့ဈြသမီးလေးရေ. (9.11.2021) မှာ ကရြောကျတဲ့ သမီးလေးရဲ့ (၇)နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့စပွီးမသေ့မီးလေး စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာစှာနဲ့ ဘဝတလြှောကျလုံး အေးခမျြးပြျောရှငျ စှာဖွတျသနျးနိုငျပါစေ။ ကွုံလာသမြှ လောကဓံကို ထကျမွတျတဲ့ အသိဉာဏျပညာနဲ့မတ်ေတာတရားကို အသုံးပွုပွီး ကြျောလှားနိုငျပါစေ။ အမှနျအမှားကို ဝဖေနျပိုငျးခွားသိမွငျနိုငျပွီး ဘဝမှာကိုယျ့အားကိုယျ့ကိုးနိုငျတဲ့အပွငျ အမြားပျေါမှာလညျး ကိုယျခငျြး စာတရားနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ သမီးလေးဖွဈပါစေ…။
မမေအေ့ပျေါမှာလညျး အရမျးကို သိတတျ နားလညျလှနျးတဲ့ သမီးလေးကို နောကျမှေးနပေ့ေါငျးမွောကျမြားစှာတိုငျအောငျ မမေေ စောငျ့ရှောကျခှငျ့ရနိုငျပါရစေ။ သမီးလေးရေ။”ဆိုပွီး သမီးလေးနဲ့ပတျသကျပွီး သူဖွဈစခေငျြတဲ့ စိတျကူးလေးတှကေို ဆန်ဒပွုရငျးသမီးလေးကို မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….